Hadal Jeedinta Musharraxiinta Madaxweyne Kuxigeenka Puntland oo galabta soo dhamaatay – Kalfadhi
Golaha Wakiillada Puntland ayaa galabta soo gabagabeeyey dhageysiga qudbadaha 11 Musharrax, oo u taagan Xilka Madaxweyne Kuxigeenka Puntland, doorasho berri ka dhici doonta magaalada Garoowe. Musharraxiintu waxa uu mid waliba sheegayey in haddii la doorto uu wax ka qaban doono xaaladaha amni xumo ee ka jira Puntland. Qaarkood ayaase tilmaamay iney xoogga saari doonaan arrimaha bulshada, sida kor u qaadida waxbarashada, furista xarumo caafimaad iyo yegleelidda kaabayaal dhaqaale.
Hase ahaatee, Musharraxiinta dooneysa Xilka Madaxweyne Kuxigeenka qaar waxay qorshahooda hogaanineed ku soo koobayeen iney si fiican ula shaqeyn doonaan Madaxweynaha, oo aysan iyagu lahaan karin qorshe u gaar ah. Musharraxiintaas waxaa ka mid ah Madaxweyne Kuxigeenka hadda wali jooga xafiiska, Cabdixakiin Camey. “Runtii, Madaxweyne Kuxigeenku lama imaan karo siyaasad gaar ah. Wuxuu ku shaqeeyaa siyaasad ay ka wada hadleen isaga iyo Madaxweynaha” ayuu yiri Musharrax Camey.
Musharrax Cabdi Ibraahin Warsame (Qoodhan) ayaa sheegay in haddii la doorto uu saaxiib fiican la ahaan doono Madaxweynaha, sida uu hadalka u dhigay. “Waxaan rabaa in Madaxweyne Kuxigeenku uu noqdo mid la shaqeeya, la saaxiib ah, kuna ilaaliya dastuurka iyo shuruucda dalka Madaxweynaha Puntland” ayuu yiri Musharrax Qoodhan.
Musharraxiinta Madaxweyne Kuxigeeka Puntland waxay si la mid ah qaar ka tirsan Musharraxiinta Madaxweynaha uga dalbanayeen Baarlamaanka Puntland inuu ku doorto iney rabaan iney dib Somaliland uga qabsadaan dhul ay Puntland aaminsan tahay inuu maamulkeeda hoos yimaado. Axmed Cali Maxamed (Dhagacadde) ayaa ka mid ah kuwaas. “Markaan arkay in Xukuumadihii hore ay ku guul dareysteen soo celinta goobalada maqan ee Puntland ayaan go’aansaday inaan isku sharaxo Xilka Madaxweyne ku xigeenka Puntland” ayuu yiri Dhagacadde..
Balse Musharrax Axmed Maxamed (Saadaq Eenow), oo rumeysan inuusan u gudbin karin Baarlamanaka waxa uu doonayo, daqiiqadaha kooban ee uu haysto darteed, ayaa sheegay inuu bogaadinayo ineysan Xildhibaannadu qaadan laaluush. “Waan u mahadcelinayaa Xildhibaannada diiday in laaluush la qaato, waana u mahadcelinayaa Culimada ka digay laaluushka” yuu yiri Musharrax Saadaq Eenow.
Qorshayasha Musharraxiinta Madaxweyne Kuxigeenka ayaa, si la mid ah kuwa Musharraxiinta Madaxweynaha, waxay lahaayeen aragtiyo aad isugu dhaw, oo dhaamaantood muujinayey iney rabaan wax ka qabashada arrimaha amaanka, dhaqaalaha, caafimaadka, cadaaladda, maamul-wanaagga, qabaa’ilka, Nidaamka Federaalka iyo in deegaanka la gaarsiiyo nidaamka qof iyo cod ah.